Fibre optical Izesekeli Abakhiqizi | I-China Fibre Optical Accessories Factory & Abahlinzeki
Imitha yamandla we-CWDM Optical Power
I-CWDM Optical Power Meter iyithuluzi elinamandla kakhulu lezinhlelo zokusebenza ezidinga kakhulu njengeziqu zenethiwekhi ze-CWDM ezinesivinini esikhulu.Ngaphezu kwama-wavelengs alinganisiwe angaphezu kwama-40, kufaka phakathi wonke ama-wavelengths we-CWDM, ivumela ubude bamazinga wokulinganisa achazwe ngumsebenzisi, kusetshenziswa indlela yokuhumusha phakathi kokulinganiswa amaphuzu. Sebenzisa umsebenzi wayo we-Hold Min / Max Power ukukala ukuqhuma kwamandla wesistimu noma ukuguquguquka.
Imitha yamandla ephathekayo ephathekayo iyimitha ephathekayo nephathekayo eyenzelwe ukufakwa, ukusebenza nokugcinwa kwenethiwekhi ye-fiber fiber. Kuyinto edidiyelwe enesibani sasemuva namandla we-auto on-off. Ngaphandle kwalokho, inikeza ububanzi besilinganiso se-ultra-wide, ukunemba okuphezulu, umsebenzi wokuzilinganisela womsebenzisi kanye nechweba lendawo yonke. Ngaphezu kwalokho, ibonisa izinkomba eziqondile (mW) nezinkomba ezingekho emgqeni (dBm) kusikrini esisodwa ngasikhathi sinye.
Amandla we-PON Optical
I-High Precision Power Meter Tester, i-JW3213 PON Optical Power Meter iyakwazi ukuhlola ngasikhathi sinye nokulinganisa amasiginali ezwi, idatha nevidiyo.
Kuyithuluzi elibalulekile futhi elihle ekwakheni nasekugcinweni kwamaphrojekthi we-PON.
I-ABS Box PLC Splitter
Imodi yethu eyodwa ye-Planar Lightwave Circuit Splitter (PLCS) yathuthukiswa ngokususelwa kunqubo eyingqayizivele ye-silica glass waveguide enokwethenjelwa okuqondaniswe kahle kwe-fiber pigtail kwiphakethe le-minia-ture, inikeza isisombululo sokusabalalisa ukukhanya esinezindleko eziphansi ngefomu elincane lefomu nokuthembeka okuphezulu. Amadivayisi we-PLCS anokusebenza okuphezulu ngokuya ngokufakwa okuphansi, i-PDL ephansi, ukulahleka okuphezulu kokubuya kanye nokufana okuhle kakhulu ebangeni elibanzi lobude be-wave kusuka ku-1260nm kuye ku-1620nm futhi kusebenza ezingeni lokushisa kusuka ku -40 kuye ku-85. Amadivayisi we-PLCS anokucushwa okujwayelekile kwe-1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64, 2 * 2, 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16 no-2 * 32.
I-compact & Light weight
Kusetshenziselwe Imicu, Izintambo kanye ne-SOC (isixhumi- kusixhumi)
Idizayini Yesiphathi Esihlanganisiwe
Okuzenzakalelayo Okugcwele, Ukusebenza okuzenzakalelayo nokuzenzakalelayo
Shockproof, Drop ukumelana
4.3 intshi Umbala LCD qapha
I-Signal Fire AI-7C / 7V / 8C / 9 isebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuqondanisa okuyisisekelo ngokugxila kwe-auto nama-motors ayisithupha, yisizukulwane esisha se-fiber fusion splicer. Ifaneleke ngokuphelele ngokwakhiwa kwesiqu esingu-100 km, iphrojekthi ye-FTTH, ukuqapha ezokuphepha kanye namanye amaphrojekthi we-fiber cable splicing. Umshini usebenzisa i-CPU ye-quad-core yezimboni, impendulo esheshayo, njengamanje ungomunye umshini wokusika i-fiber esheshayo emakethe; ngesikrini esingu-5 intshi esingu-800X480 sokucaca okuphezulu, lo msebenzi ulula futhi unembile; kuze kufike ezikhathini ezingama-300 ukugxila, okwenza kube lula kakhulu ukubona i-fiber ngamehlo. Imizuzwana engu-6 isivinini sokuqondanisa kokulinganisa, imizuzwana eyi-15 ukufudumeza, ukusebenza kahle kukhuphuke ngo-50% uma kuqhathaniswa nemishini ejwayelekile yokuphonsa.
FTTH Ikhebula Outdoor
Ikhebula lokudonsa langaphandle le-FTTH (GJYXFCH / GJYXCH) libizwa nangokuthi ikhebula le-butterfly elenza intambo elenziwe ngekhebula le-butterfly yasendlini kanye nelinye ilunga lamandla eliyi-1-12 fiber cores. ikhabethe le-butterfly lehla elinentambo yovemvane yasendlini nelungu lamandla elengeziwe ezinhlangothini zombili. Ukubalwa kwe-fiber kungaba yi-1-12 fiber cores.
FTTH Ikhebula Endlini
Ikhebula lokudonsa le-FTTH elinokufinyeleleka kalula ku-fiber nokufakwa okulula, ikhebula le-FTTH lingaxhunywa ngqo emakhaya.
Ifanele ukuxhuma nemishini yokuxhumana, futhi isetshenziswe njengekhebula lokwakha ukufinyelela ohlelweni lokusabalalisa izakhiwo. Imicu ye-optical ibekwe maphakathi futhi amalungu amabili afanayo eFiber Reinforce Plastic (FRP) abekwe ezinhlangothini zombili. Ekugcineni, ikhebula ligcwaliswe ngomgogodla we-LSZH.
Sinikeza zonke izinhlobo ze-fiber optic patch cord yokuxhuma nama-EPON / GPON ONUs.
Intambo yokubamba ikhebula le-fiber optic elisetshenziselwa ukunamathisela ithuluzi elilodwa komunye umzila wesiginali.
I-SC imele Isixhumi Sobhalisile- isixhumi sesitayela sokudonsa / sokudonsa isitayela. Kuyisikwele, isixhumi se-snap-in sezixhumi ngokunyakaza okulula kokudonswa futhi kuyakhonjwa.
Fibre Optical Distribution Box
Ukuvalwa okuvundlile kunikeza isikhala nokuvikelwa kwe-fiber optic cable splicing and joint. Zingabekwa phezulu emoyeni, zingcwatshwe, noma zifakwe ngaphansi komhlaba. Zenzelwe ukungabi namanzi nothuli. Zingasetshenziswa emazingeni okushisa asukela ku -40 ° C kuye ku-85 ° C, angabamba ingcindezi engama-70 kuye kwangama-106 kpa kanti icala livame ukwenziwa ngopulasitiki wokwakha oqinile.
Uhla lwebhokisi le-Fiber Optic Distribution lwenzelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa ngaphakathi kweFiber To The Home (FTTH) Passive Optical Networks (PON).
I-Fibre Distribution Box uhla lomkhiqizo wezindawo ezihlanganisiwe, udonga noma isigxobo esifakwa izintambo zokusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle. Zenzelwe ukuthi zithunyelwe endaweni yokuhlukaniswa kwenethiwekhi ye-fiber ukuhlinzeka ukuxhumana okulula kwamakhasimende. Ngokuhlanganiswa nokungcola kwe-adaptha ehlukile kanye nezihlukanisi, lolu hlelo lunikeza ukuguquguquka kokugcina.
Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Xfp Transceiver, Optical Fibre Module, IHuawei Qsfp +, Intengo ye-Huawei Olt, I-Sfp C ++,